Hanti lagu iibiyo koonfurta Tenerife!
dareenka Dhamaan MagaalooyinkaAdejeAgua DulceAlcalaArafoArguayoAricoAronaBajamarBuenavista Del NorteBuenavista GolfCandelariaChayofaChiguergueChioCosta Del SilencioCueva De PolvoCueva Del VientoEl JaralEl MedanoEl PorísEl PrisEl SauzalEl TanqueFasniaGarachicoGenovÉsGranadilla De AbonaGuia De IsoraIcod De Los VinosIguesteFaa'iidoLa CalderaLa Caleta De GuimarLa Caleta De InteriánLa LagunaLa MontañetaLa OrotavaLa ReinaLa VegaLas AguasLas AmerikaLaas caanoodLaas caanoodLaas CaanoodLaas-caanoodLas LagunetasLas ManchasLas PortelasLas RosasLos AbrigosMasiixiyiintaLos GigantesLos RealejosLos SilosMascaPalm MarPalmarParque De La ReinaXilbaa De La ArenaPlaya De San JuanPlaya ParaisoPlaya San MarcosPlaya SiboraPuertito De GuimarPuerto De La CruzPuerto De SantiagoPunta De HidalgoRadazulSan AndresSan EugenioSan IsidroSan José De Los LlanosSan Juan De La RamblaSanta UrsulaSantiago Del TeideSotavientoTabladoTacoronteTagananaTajaoTamaimoTauchoTejina De IsoraTierra Del TrigoValle De Guerra
Sariiraha jiifka11 21 311224345679
Qubeyska musqulaha11 21 323456
Hanti lagu iibiyo aagga cimilada koonfureed ee Tenerife oo leh cimilo-gu'ga xagaaga iyo fara badan oo qorraxda sannadka oo dhan ah!
Waa muhiim inaadan ku jahwareersan juquraafi ahaan koonfurta Tenerife oo leh cimilo koonfur!
Dhamaadka waxa runtii muhiim ah waa cimilada! Dadka qaarkiis waxay doorbidaan qorraxda iyo qallalan ee Koonfur, kuwa kale ee qorraxdu ka yar tahay, laakiin Waqooyiga oo ka sii badan cagaaran Tenerife.
Halkan waxaa ku yaal khariiddada cimilada ee jasiiradda - dhab ahaantii waa khariidad roob doon ah. The Midabka guduudka oranji wuxuu matalaa waxa dadku u yaqaan Koonfurta Tenerife (mararka qaar adoon ogayn tan). Sidoo kale waa inaad xisaabta ku darsataa, apxkaas. 100 mitir kasta oo ka hooseeya heerkulka xeebta ayaa 1 dropsC hoos u dhacaya, markaad buurta fuuleyso.
Sidaad arki karto waxaa jira goobo cimilo Koonfurta ah oo ku yaal woqooyiga jasiiradda! Tusaale ahaan, Santa Cruz iyo Igueste, oo ku dhowaad woqooyiga-inteeda badan ka ah Tenerife, runtii waxay leeyihiin sanadka-xagaaga cimilada guga-sannadka.
Aqal cusub oo laga dhisay El Medano!
Qolof cusub oo cusub oo leh laba qol, 2 musqul, terrace iyo jardiin dhan 1 mitir wadarta dhismaha cusub ee El Medano, Tenerife! ...
Aqal la cusboonaysiiyay oo ku yaal Playa De San Juan!
Qolka 2aad ee qolka jiifka ah ee dhalaalaya ee qaybta xasilloon ee Playa de San Juan, Tenerife! Guriga wuxuu ku yaal dabaqa 2aad ee ...
Xeebta San Juan
Aqal u dhow Xeebta Las Teresitas!
Iib ah: Guri ballaadhan oo ku yaal San Andres, Tenerife! Waxay ku yaalliin qayb xasilloon oo magaalada u jirta 1 km u jirta xeebta Laas Teresitas caan ah. Qurux ...
Qolal qurux badan oo ku yaal Los Gigantes!
Guri qurux badan oo ku yaal Los Gigantes, Tenerife! Muuqaallada Panoramic ee badda, buuraha dushooda iyo badda Los Gigantes. Meel ku habboon meel deggan…
Guryo qurxoon oo ku yaal Alcalá 50m oo laga keenay Badweynta!
Iibka: 4 guri oo sariirood ah oo ku dhex yaal alcala, Guia de Isora, Tenerife! Goob kufiican oo 50 mitir u jirta badda, dhowr tillaabo ...
Guryaha Xeebta-Weyn ee Gaari-Weyn leh oo leh Dhul aad u Fiican!
Guryaha safka koowaad ah ee safka koowaad ah oo iib ah oo ku yaal Playa de la Arena, Tenerife! Waxay u egtahay inay ku nool yihiin markab markab saaran. Bannaanka ayaa gabi ahaanba ...
Aqalka raaxada leh ee leh Muuqaalada & Beerta
SIDII KASTA: Guri raaxo leh oo ku yaal tuulada quruxda badan ee Las Manchas, Santiago del Teide, Tenerife! 360º aragtiyo panoramic badda, dooxada iyo La ...
Hoyga Wadanka, Guriga
Guryo Weyn Oo Weyn Oo Weyn Oo Ku Yaal Agagaarka Playa!
Guri qurux badan oo 50 mitir u jira badweynta Playa de la Arena, Tenerife! Meel hagaagsan qeybta ugu fiican magaalada! Sharaxan ...
Aqal leh Shati Dalxiis Dalxiiska
Guri iib ah oo leh laysan dalxiis oo ku yaal Arona, Tenerife! Guriga wuxuu ka kooban yahay 1 qol jiif, 1 musqul, qol jiif oo leh jikada, patio gudaha iyo ...
Iibsi! Qiima dhimay!
Aqalka Alcalá, Tenerife oo leh laysanka Dalxiiska !!
Iibka Alcala, Tenerife! Guri ballaadhan oo ah 3 heerar: Dabaqa hoose: qolka fadhiga, jikada iyo wc. Dabaqa 1-aad: 3 qol jiif, 1 XNUMX gaar ah ...
Penthouse 50m oo ka socota Badweynta Laas Galletas, Arona!
Guri iib ah oo ku yaal Laas Galletas, Arona, Tenerife. Muuqaalo yaab leh oo Badda! Waxaa si buuxda ugu yaal agagaarka xeebta bartamaha magaalada! Qiimo aan loo dulqaadan karin! ...
Xariiq leh Garage, barkad iyo Muuqaalo Badweynta Panoramic!
Las Caletillas, Tendeife Candelaria Tenerife
Iibsashada Laas caletillas, Candelarias, Tenerife! Duubis dheereed leh oo leh 85m2 oo la dhisay + 35m dhul balaaran oo leh aragtiyo bada bada. Waxay leedahay wiish, garaash ...
Guri, Condo / Townhome / Row Home, Duplex
Guryaha 10-aad ee Dabaqa leh oo leh Muuqaalo muuqaal ah oo ku yaal Playa Paraiso!
Guri qurux badan oo lagu gado Playa Paraíso, Tenerife oo kuyaala Hard Rock Café! Guriga wuxuu ku yaalaa Paraíso del Sur ...
Guriga Si Loogu Soo Noqdo + Dhul Lagu Soo Bandhigay Muuqaalo Taucho, Adeje!
Finca leh Vineyard iyo Muuqaalada Badweynta Panoramic!
DALKA: finca quruxda badan ee Jaral, Guia de Isora, Tenerife! Finca leh aragtiyo panoramic cajiib ah oo xeebta ka socota Adeje ilaa Los Gigantes! Laba ...
Aqalka Qaranka, Finca, Guriga, Winery
Guryo Qurxoon oo Qurux Badan Oo Lagu Iibiyo Ku Dhow Taganana!
Guri wadan qurux badan oo ku yaal aagga Taganana, Tenerife! 80 sq.m. guri 800 sq.m. qolka, laba qol, musqusha, qolka fadhiga, jikada qalabeysan. Hanti ...
Aqalka Qaranka, Finca, Guriga
Guryaha Dhaqaalaha ee Xeebta u dhow El Poris!
Iibka: Guri yar oo raaxo leh oo lagu iibiyo El Poris de Abona, Tenerife dhawr mitir u jirta xeebta iyo ballacinta! Guryaha waa ...
Guryo Fiican Oo Ku Yaal Playa De San Juan!
Aqal lagu iibiyo oo ku yaal xaalad aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan oo kuyaal Playa de San Juan, Guia de Isora, Tenerife. Waxaa si buuxda loo diyaariyay, ...
Aqal ku yaal Laguna Park I
Iibsi: Guri ku yaal Laguna Park I oo ku taal Las Americans (Costa Adeje), Tenerife! 1 qol jiif, 1 musqul, jikada madax banaan, lambarka sagaalaad 2, gudaha ...
Villa Crab Island, Los Gigantes!
Iib ahaan: Guri ballaadhan oo leh garoon u gaar ah, barkad dabaal iyo garaash ku yaal Crab Island, Los Gignates, Tenerife! Gurigu wuxuu ka kooban yahay nolol ...
Laba Guri oo leh Muuqaalo La Yaab Leh Oo Lagaga Qaaday Dhismeyaasha Gig Giges!
Hanti ku habboon dhammaadka jidka deggan ee deggan oo leh aragtiyo qurux badan xagga buurtaha ee Gig Giges, Santiago del Teide, Tenerife! Labadan ...
Guryaha, Condo / Townhome / Row Home, House
Guri ku habboon in lagu Dheelo Dhabarka Xeebta La Arena!
Iib ah: Guri ku yaal magaalaynta “Tagara”, Playa de la Arena, Tenerife! Meelfiican in ka yar 100 mitir oo xeebta ciidda ah ee La Arena! Dhul gariir qorax leh ...
Guryaha Hoyga Xeebta ee Xeebta leh ee Playa De San Juan!
SOO SAARID: Guri ballaadhan oo casri ah oo ku yaal xeebta xeebta ee Playa de San Juan, Tenerife! Meel gaar ah oo toos looga helo hortiisa ...
Big Ocean Front Row Home ee El Medano!
Iibsashada: Hanti qurxoon oo qurux badan oo ku taal El Medano badda hore, Tenerife! Guri saddex-dabaq ah oo leh garaash gaar loo leeyahay oo toos looga galo garaashka ilaa ...
Dhul ballaadhan oo Badweyn leh oo ku yaal Punta Negra, Playa De La Arena
Guri ballaadhan oo goglan oo 10 mitir u jira badweynta. Mid ka mid ah xaafadaha ugu wanaagsan Tenerife. Barkadaha bulshada. Garaash gaar ah. Qorrax ka soo…
Guryaha Muuqaalka Badda ee Palm Mar!
SOO SAARID: Aqal ku yaal magaalada 'Flamingo' oo ku taal Palm-mar, Tenerife! Meesha dhexe oo kaliya 450 mitir badda. Muuqaallada Panoramic ee magaalada ...
Guryaha Xeebta Hore ee Xeebta ee El Medano!
Iibka: Guryaha hore ee xeebta weyn ee ku yaal El Medano, Tenerife! Safka koowaad ee badda! Muuqaallo yaab leh! Guriga waxaa lagu iibiyaa qalab, iyo baarkin ...
Guriga Qolka Farxada Badda ee Ku Dhow Xeebta La Tejita!
Iibsashada: Guri ballaadhan oo leh muuqaallo jardiinooyin iyo badweynta ku yaal El Medano, Tenrife! 2 qol jiif (10m + 8m) + 1 qol aan daaqad lahayn ...
Guryaha Wanaagsan ee San Isidro!
SOO SAARID: qayb ka mid ah San Isidro, Tenerife si aad u wanaagsan ayaa ku yaal, dhexda avenida Santa Cruz. Jiko buuxda oo ku sugan xaalad wanaagsan, musqul, ...
Aqal 100m ka socda Badweynta!
Iibka: Guryaha ku yaal Puerto Santiago 100 mitir xeebta. Waa aqal ku yaal dabaqa koowaad halkaasoo ku taal ...
Guryaha Weyn ee Xeebta Weyn 215 Sq.m.!
Iib ahaan: Guryo hore oo xeebeed qaali ah oo qaali ah oo ku yaal Radazul, Tenerife! Aag qurux badan oo u dhaw magaalada caasimada ah ee Santa Cruz. Farxad yaab leh ...
Guryaha Hoyga Xeebta - Playa Chica
Iibka: Guryaha hore ee Badweynta oo u dhaw Playa Chica, Tenerife! Waxay si habsami leh ugu taal badhtamaha magaalada hore ee Puerto de Santiago! Muuqaalo yaab leh oo ...
Aqal la cusboonaysiiyay oo ku yaal Villas Canarias, Adeje
Iibka Costa Adeje, Tenerife: Guryo dhowaan la dayactiray oo ku yaal "Villas Canarias" oo u dhow xarunta wax gadashada ee "Gran Sur". Meel aad u wanaagsan gudaha dhismaha. Hoose ...
Xeebta Xeebta Xeebta ee loo yaqaan 'Beachfront Cave House, South Coast Tenerife'
Candelaria, Tendeife Candelaria
Guryo qurux badan oo xeebta ku yaal oo qurux badan oo lagu iibiyo Playa Viuda, Candelaria, South Tenerife. Meel deggan oo xasilloon oo lagu nasto. Helitaan aad u wanaagsan waddo-weyn ee TF-1 ...
Condo / Townhome / Row Home, Duplex, House
Aqal 50 Mitir Oo Xeebta Ka Socda!
Aqal 50 mitir u jira xeebta Candelaria !! Meel aad u wanaagsan iyo xaalad aad u xafidan! Jawi mudnaan leh. Dabaqa 7-aad ee leh Terrace. Dabaasha ...
Guri ku yaal San Eugenio, Costa Adeje
Guri iib ah oo ku yaal Costa Adeje, San Eugenio, aagga Torviscas Alto ee Caledonia Park dhismaha. Aqal si buuxda ayaa loo iibiyaa. Qolka fadhiga, 1 qol jiif, ...
Ocean Front House + 4 Guryo Fasax ah!
ILAALI LAGU SAMEEYAY DHAQAALAHA! Xadiiqadda Almaciga ee Anaga! Dhisme leh afar guri oo fasax ah + guri madax banaan oo hadda kireynaya sidii guryaha fasaxa ...
Aqal, Ganacsi, Guryo Dal, Guryo, Maalgashi
Guriga Waaweyn ee Cusboonaysiinta 'Palm-mar!
Iibsashada: guriga sida gaarka loo leeyahay ee gebi ahaanba la hagaajiyay. Waxay ku taal aagga la deggan yahay ee Palm Mar, Arona. Waxay ka kooban tahay 3 qol jiif oo waaweyn, mid ...
Dhisme weyn oo 4-dabaq ah oo ku yaal Magaalada 300 oo Mitir La Arena Beach !!
Wejiga ballaaran ee 4 dabaqa ah ee iibka ah oo ku yaal Playa de la Arena, Tenerife! Meel ku habboon oo 150 mitir u jirta badda iyo 300 mitir oo ka ...
Guryaha Milixadda Badda ee “Cornel Sea View Room” Gudaha “olivia Sunset”
Iibinta guryaha casriga ah ee Playa de la Arena, Tenerife. Aagga Los Gigantes. Dusha sare ee geeska leh aragtida badda. Isku-dhafan oo casri ah oo leh dabaasha weyn ...
Guriga Weyn ee Big Oceanfront oo leh Muuqaalo yaab leh !!
SIDII KALSOONKA: Hantida badda ee gaarka loo leeyahay ee ku taal magaalada xeebta leh ee El Poris, oo ku taal koonfurta Tenerife, Canary Islands, Spain! Muuqaalka "Porís" ee ...
Guriga 60 Mitir Oo Laga Soo Qaaday Badweynta Alcala !!
ILAALINTA: Hanti 4-dabaq ah oo waaweyn oo ku yaal Alcala, Guia de Isora, Tenerife! Meel ku habboon oo 60 mitir u jirta badda oo leh aragtiyo panoramic !! 3 dabaq,
Guryaha Nasashada ee Los Gigantes!
Iibsashada: Guri qurux badan oo ku yaal dhisme qaali ah oo ku yaal magaalada Los Gigantes, Tenerife! Laba barkadood oo lagu dabaasho iyo Jacuzzis! Dhul ballaadhan oo leh aragti badda! Hawada ...
Guryaha Weyn ee Magaalada Bartamaha Magaalada Los Gigantes
Iibsashada: Guri ballaadhan oo ku yaal magaalada hoose ee Los Gigantes, Tenerife! Meel hagaagsan oo toos ah bartamaha magaalada, kaliya talaabooyin aad uga fog ...
Guryaha Weyn ee Guryaha Weyn leh oo leh aragtida Panoramic!
Iibsi: Hanti aad u sarreysa oo leh aragtiyo xeebaha badda ku teedsan ee Los Gigantes, Tenerife! Gurigu wuxuu ku yaal dabaqa ugu dambeeya oo leh hal deris toos ah….
Guryaha Weyn ee Xeebta-Weyn leh oo barkaddu leedahay
Guri dhawaan la dayactiray oo iib ah Playa de la Arena, Tenerife! Badweynta Hindiya ee ku taal saqafyada taayirrada leh waxay siisaa dareemid Mediterranean. Si buuxda u qalabaysan oo qalabaysan. Dabaasha ...
Finca-villa Ku dhaw Playa De La Arena
Iibka finca weyn ee Cueva de Polvo, oo u dhaw Playa de la Arena, Los Gigantes, Tenerife. Meelfiican In kabadan 1,5 hektar oo dabaq ...
Aqal leh Muuqaalo Badda oo ku yaal Puerto Santiago!
Iibsashada: Guri ballaadhan oo leh aragtiyo panoramic ah oo ku yaal Puerto de Santiago, Tenerife! Laba qol jiif iyo qol weyn oo wada nool! Dhulka layaabka leh ee qoraxda leh ee leh xeebaha bada ...
Guryo aad u fiican oo 150m kajira Xeebta!
SOO SAARID: Hanti aad u Fiican oo leh aragti Biyamaroodka bada oo kuyaal magaalada hore Puerto de Santiago, Tenerife! Goob kufiican oo 150m u jirta xeebta “Chica” iyo ...
Dhismaha Xeebta Xeebta Wanaagsan ee Nice Compact!
ILAALINTA: Hanti aad u khaas ah oo ku taal Playa de la Arena, Tenerife! Guryo aad u fiican oo isku dhafan oo isku jira oo 100 mitir u jira La Arena ...
Guryaha Weyn ee Puerto Santiago !!
SOO SAARID: Guri ku yaal Puerto Santiago, Tenerife !! Guryaha wanaagsan ee ku yaal bartamaha Puerto Santiago. Waasac iyo shaqo !! Ku habboon qoyska carruurta leh. Ku dhaw garoonka ciyaarta, ...
100% Dib-u-Dayactirka Guryaha Oo Ku Yaal Goob Gaar ah!
€ 1,600 bishiiba
SIDII KASTA: Hantida gaarka ah ee Playa de la Arena, Tenerife! Kani waa guriga ugu sarreeya ee guryaha la kireysto ee ku yaal geeska oo keliya ...
Guryaha Nasashada + Pool Infinity On Dusha sare !!
Iibsashada: Guryaha raaxada leh ee leh aragtiyo badda dhexdeeda ah iyo barkado bulsheed oo ku yaal Playa de la Arena, Tenerife! Qol ballaadhan oo dhowaan la dhisay oo leh laba dabaq oo waaweyn ...
Guriga Si Loogu Soo Noqdo Xarunta San Andres!
Iibsashada: Guryo raaxo leh oo ku yaal bartamaha Sun Andres, Tenerife! Meel kufilan mid ka mid ah wadooyinka ugu wanaagsan magaalada. Kaliya 150 ...
Guri ballaadhan oo ku dhow La Arena Beach!
SOO SAARID: Guri ballaadhan oo geeska u dhow xeebta La Arena, Tenerife! Xeebta ayaa kaliya daqiiqado u jirta cagta! Muuqaallada badda ee daaqadda qolka jiifka ...
Duplex + Quful Garaash 200m Oo Xeebta Ah!
LACAG LA'AAN: Alaab la yaab leh oo ku yaal San Miguel de Tajao, Tenerife! Kaliya 200 mitir xeebta, dekedda kalluumeysiga iyo makhaayadaha kalluunka ee ugu fiican ...
Guryo la dhigto + Baarkin ahaan 100m laga keenay Badda!
DUKAANKA: Guri + meel baabuurta la dhigto oo ku taal garaashka dhulka hoostiisa ku yaal, Playa de la Arena, Tenerife! Kaliya 100 mitir badda dhexdeeda! Laba daqiiqo oo loo socdo ...
Guryaha Centric oo leh Patio gudaha Puerto De Santiago!
Iibsashada: Guri qurux badan oo ku yaal bartamaha Puerto de Santiago, Tenerife! Waxay ku taal dabaqa labaad ee dhisme wanaagsan oo u dhaw Lidl iyo ...
Guryaha Weyn ee Gaar ah Oo Ku Yaal Magaalada Los Gigantes
Guryaha gaarka loo leeyahay ee guryaha lagu iibiyo ee ku yaal magaalada Los Gigantes, Tenerife. Muuqaallo muhiima oo caan ku ah badda, Los Gigantes cliffs iyo Mount Teide! Aad u gaar ah iyo ...
Guryaha Weyn ee Guryaha Weyn ee Costa Del Silencio!
SOO SAARID: 2 qol jiif oo ballaadhan oo ku yaal Costa del Silencio, Tenerife! Beesha ugu wanaagsan magaalada oo leh maxkamada teniska, barkadaha dabbaasha iyo ceel ...
Guryo Casri Ah Oo Faa'iido Ah Oo Ku Yaal Puerto De Santiago!
SIDII KASTA: Hanti ballaaran iyo hanti casri ah oo ku taal bartamaha Puerto de Santiago, Tenerife! Kaliya dhawr talaabo oo ka fog Plaza, baararka, dukaamada, suuqyada waaweyn, ...
Guri qurxoon oo leh Muuqaallo Badweynta Hindiya Guia De Isora!
LAGU SAMEEYO: Guri ballaadhan oo qurux badan oo ku yaal bartamaha Guia de Isora, Tenerife !! Meel ku habboon waddo deggan
Laba Gole + Patio Hal Shirqool!
Laba guri oo ku yaal hal goob oo ku taal Arguayo, oo u dhow Santiago del Teide, Tenerife. Goobtu waa cajiib! Tuulo xasilloon 15 daqiiqo ka fog Los ...
Aqal Xeebeedka Xeebta ah + Garageena Candelaria !!!
Iibka: Guryo raaxo leh oo 80 mitir u jira dekedda iyo xeebta ku taal Candelaria, Tenerife !!! Goob aad u wanaagsan iyo qiime ku jira mid ka mid ah ...
Qurux badan oo Villa-finca ah oo u dhow Los Gigantes!
Finca iibka ah waxaa lagu iibiyaa La Caldera 5 daqiiqo gudahood oo laga raaco Los Gignates iyo Playa de la Arena, Tenerife. Guri casri ah oo leh barkad iyo ...
Guriga Magaalada si dib loogu habeeyo Santiago Del Teide !!
DIIWAAN GALIN: Guri ku yaal magaalada oo leh patio si dib loogu hagaajiyo Santiago del Teide, Tenerife !! Bartamaha id id bartamaha bartamaha wadada ...
Guryaha raaxada ee Garaash ku yaal Tamaimo!
Iib ah oo lagu iibiyo guri qaali ah oo qaali ah oo ku yaal Tamaimo, Tenerife! Muuqaalo qurxoon oo laga soo qaaday garoonka. Gawaarida gaarka loo leeyahay ee garaashka dhulka hoostiisa ku yaal. Elevary. Qolka kaydinta dheeriga ah ...
Villa leh barkad u dhaw Los Gigantes !!
Iib iibinta villa weyn oo gogosha leh oo leh aragtiyo badda dhexdeeda ah oo ku yaal La Caldera, kuna sii jeedda Los Gigantes una taga Tamaimo. Deganaan iyo meel qurux badan oo aan lahayn ...
Aqal Duplex ah oo leh Muuqaalo Badweyn
Iibso guri qurxoon oo muuqaal ahaan u leh badda dusheeda iyo qulqulka Los Gigantes ee dhismayaasha leh barkad kulul. Aqalku wuxuu ka kooban yahay 2 qol jiif, ...
Guri leh Winery + Dhul Lagu Iibinayo Magaalada Taucho !!
SOO SAARID: Hanti qurux badan oo ku taal magaalada Taucho, Tenerife! Meel ku habboon nolol nabad ah ama ijaar xirfadeed! Suurtagalnimada in guriga loogu beddelo laba laba ...
Guri qurux badan oo leh Patio In Arico !!
SIDII KASTA: Hanti balaadhan oo ku taal Arico Viejo, Tenerife! Guri qurux badan oo qurux badan meel qurux badan! 5 qol, 2 jikooyin, 2 qol ku nool, 3 musqulo, ...
Guryaha Weyn ee ku yaal Bartamaha Magaalada Puerto De Santiago!
Iibsashada: Guri ballaadhan oo ku yaal bartamaha Puerto de Santiago, Tenerife! 3 qol iyo qol weyn oo leh jikada. Dhismaha geeska panoramic. Gaar ah ...
Shirqool Dhisme Magaalo oo Masawir ku leh Badweynta Plaza De Tamaimo !!
SIDII KALSOONKA: Rabitaanka magaalooyinka waawayn ee u dhaw Plaza de Tamaimo, Tenerife! Meelfiican oo leh aragtiyo badda ka kooban oo xaddidan barranco Tamaimo. Qofna ma dhisi doono ...
Shirqool Dhisme Magaalo oo Masawir weyn ku leh Magaalada Tamaimo !!
Iibsashada: 700 sq.m. hanti ku taal Tamaimo, Tenerife! 100% dhismaha magaalada oo leh xeebaha buuraleyda iyo muuqaalka buuraha! Meel ku habboon qaybta xasilloon ...
Dhismaha Ganacsiga ee Waddada weyn ee loo maro Tamaimo!
DUKAANKA: Goobaha ganacsiga ee ballaaran ee ku yaal magaalada Tamaimo ee ku taal jidka weyn ee loo maro Teide. Meesha basku istaago hortiisa ee xafiiska hortiisa….
Aqal leh barkad ku dhagaysa 300m xeebta!
Iibsashada: Hanti weyn oo 300 mitir u jirta xeebta ciidda leh ee Laas Caletillas, Tenerife!
Aqal leh barkad 300m laga soo direy Xeebta Laas caanood!
Guriga Weyn ee Granadilla De Abona!
SIDII KALE: Guri dhowaan la soo celiyay oo ku yaal Granadilla de Abona, Tenerife! Suurtagalnimada in la dhiso dabaqyo badan! Guriga oo ballaadhan! Gurigu diyaar buu u yahay nolosha!
Guryo Balaadhan oo Wareegsan oo ku Yaal El Poris !!
LACAG LA'AAN: Dhul-ballaadhan oo dhul-ballaadhan oo ku yaal El Poris, Tenerife! Guryo waaween oo leh aragti badda dhexdeeda 150 mitir u jirta biyaha! Si aad u xafidan oo isbadal leh ...
Gurigii Hore ee Gumeystaha Si Loogu Soo celiyo Xarunta Dhexe Ee Arona !!
DIIWAAN GELIN: Guri gumeysi oo gaboobay si loogu soo celiyo bartamaha magaalada Arona, Tenerife! Meel aad ufiican oo qayb xasilloon oo ka ...
Gurigii Gumeysiga, Guriga
Guryo waaweyn oo gumeysi ah + Dhul ku yaal Bartamaha Arona !!
SIDII KASTA: Guri weyn oo gumeysi ah oo lagu dayactirayo bartamaha magaalada Arona, Tenerife! Meel aad ufiican oo qayb xasilloon oo ka ...
Aqal cusub oo Filanaan ah oo ku dhow Playa De San Juan !!
Iibsashada: Hanti cusub oo ballaadhan oo 3 daqiiqo uun u jirta xeebta Playa de San Juan, Tenerife! Meel ku habboon degganaan deggan ...
Guryaha Weyn ee Weyn + Gaariga La Perla !!
SIDII KASTA: Hanti balaaran oo leh dhul ballaaran oo balaaran oo kuyaal Playa de la Arena, Tenerife! Waxay ku taal bartamaha Playa de la Arena, ...
Guri ku yaal magaalada Los Abrigos 150m oo ka socda Badweynta !!
Iib iibinta guri qurxan oo ku yaal Los Abrigos, Granadilla de Abona, Tenerife! Dhismuhu wuxuu ku yaal wado-deggan deggan oo 150 mitir u jirta ...
Aqal 80 Mitir Oo Laga Soo Qaaday Badda Dhexdeeda
Saddex qol jiif oo iib ah oo ku yaal Puertito de Guimar, Tenerife! Guri ballaadhan oo 80 mitir u jira badda iyo 400 mitir xeebta! ...
Aqal qurux badan 200 Mitir Oo Xeebta Ka Mid Ah !!
Las Caletitas, Tendeife Candelaria Tenerife
Iibinta guryaha ku yaal dhinaca-badda ee ku yaal Laas Caletitas, Candelaria, Tenerife! Guri cusub oo ku habboon xaalad 200 mitir u jirta xeebta. Si buuxda u qalabaysan, qalabaysan oo ...
Guryo Balaadhan oo leh Muuqaalo Badweyn oo ka Taagan Candelaria
Iibka: Guriga weyn ee Candelaria, Tenerife! Meel ku habboon meel deggan oo 200 mitir ka sarreysa heerka badda. Muuqaallo muuqaal qurux badan leh oo loo ...
Horumar cusub: Guryo la Leh Gawaarida Gawaarida ee Alcala!
Iibsi: Kala doorashada guryaha cusub ee magaalada hoose ee Alcala, Tenerife! Meel kufiican qeybta xasilloon ee magaalada kaliya 5 daqiiqo ...